All important information of the STEEM user: aungkyawch - STEEMIT Holmes
Accounts ID: 666481
Accounts Name: aungkyawch
Voting Power: 8,757
Current Mana 5,381,290,255
Last Post 2019-04-03T07:27:42
Last Root Post 2019-04-03T07:27:42
Last Vote Time 2020-06-06T15:01:54
Vesting Reward Balance 115 VESTS
Vesting Shares 4,655 VESTS
Delegated Vesting Shares 2,043 VESTS
Recieved Vesting Shares 3,533 VESTS
To Withdraw 444,329,832
Curation Rewards 60
Posting Rewards 3,977
1949 hkunhaittwin myanmarninenganeatmangyaainmasaat ': myanmarninengantaw hcain saat mapyatpatipakhk lele Rothman, Liz Ronk aouttobharl 24, 2017 aainhpyauutaw '' darhar aalwan sabharw hkae . '4sammatahaunggeat Viral dharatpone nhaint pahtam uhcwar Ladies noutwaalponepyin rohaingyaar mwathcalain dukhkasaimyarr bhain g larr dae seshoet hceesainn saatlaat aahpyit myanmarninengantwin nyhain paann nhaiuthcaatmhu htwatpyaylarsaw, saungghkyae saw luuhtaungpaunggmyarrhcwar eat yahku lhu aahkwinaara ... more
2018-05-04 05:31:57 Block Num: 22,126,610
satihtarrrainnnhaeemyahuutnhaansuumyarraatwat '' myahoettaw karkwal aapaw aalwan shinnlainnsawmyethci '' nhaintaatuu multi- pinesinemhu hpyayshinnhkyetaahpyit Troy Trojan aakyaanpyu htarrsai . haanhkyetnye: days eat hceepwarrrayy pyanlai narlaan htuu saatlaataahpyit Hughes laee lolarrsuu urawp taut rauttai; suu Crux urawp aahtuu aahkyayaanaymyarr raanponengway kaungghcwar aakyoe hkanhcarrr hphoet nayrar hkya nine yonekyisai . deamyint marr saw hkanyuuhkyet raanponengway ponemhaan aarr aadhikaa ... more
2018-04-18 15:47:39 Block Num: 21,678,855
sutaysemyarr pyeesarr so hkaesaw aararko saatsay pya hkaesai k i aahkyetmhar pyu mi hkaesai .abhaalaarar puuhpaungg aaatkwal pyeenout laat hkout sait aatwat nay raitsaw disproof- noutpine twaeshihkyet myarr kaw? sar taithcatetaitpine mhaan parsai, puuhpaungg pyaokya, darpaymaae: hpyitpartaal . hpyitnine hpyit larmaeet aaatkwal myarraatwat kyaar nhaitsaal minait shoetmahote dar kyount aasait k puuhpaungg hpaantee kyaanraitsuu suutwayko hkyaae htwinraan tribonucleation kyaar karl hpyiteat . n ... more
2018-04-17 14:51:15 Block Num: 21,648,927
tait u k laelarmhu aasait k popyee konekya saeet aahkar luutway sisisarsar lyawwnaee so dar m sout r aan saw nghaar aakyaanpyu htarrsai . aasopar twaeshihkyet aamyarrpyisuu kyannmarrayy maharbyauuhar- darhkaw " so dar aahkwan," shoetmahote s kyarr- duuahpyaw yamakar- kyount makyaarsayyme nhait myarraatwin pomo luukyaitemyarr larhkaesai eat hcyaayynhuann Philadelphia twin Drexel University mha sutayse twayk aahkwan eat pahtam nhaitlaaatwinnayhtinesuumyarr '' hcarrsonemhu laelarnay nhainta... more
2018-04-16 01:44:51 Block Num: 21,604,413
"Donegal aalw n aalwan lhap hkyinn nhaint htitehtitetaantaan denhait htiutahcaatapyawwat htine," aardan Twidell, PrivateFly eat CEO hpyitsuu k pyawwpartaal . " ၎inneat kyamtam kamroetaann shuhkainnmyarrmakyaarsayymek Star Wars roteshinmyarr aatwat tainayrartaithku shi. , dar kyountabhaal kyount kyi shu raan hkell yain parbhuu . " htiut t saal kolaee hcakottalaan rae mayone Donegal, aineyarlaan eat kyawwat taung kamhkyay htellmhar tait u sarotesaungaahkaannkand "Star Wars: aasopar aainaar ... more
2018-04-15 15:27:21 Block Num: 21,592,063
Jack Nicholson နှင့် Louise ဖလက်ချာသရုပ်ဆောင်ရုပ်ရှင်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုနဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအပါအဝင်ငါးအော်စကာ, အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာထိပ်ဆုံးငါးအကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်အမျိုးအစားအနိုင်ရသမိုင်း၌ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Forman ၏မိတ်ဆွေများကိုညွှန်ကြားရန်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သူတို့တစ်တွေနိုင်ငံခြားညွှန်ကြားရေးမှူးအတွက် "ဒါ" အမေရိကန်တို့၏ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ပုံပြင် "တစျခု, အ Cuckoo ရဲ့သိုက်ကျော်ပျံသန်း" ။ "ငါသည်ငါ့ထံသို့့စာပေပေမယ့်အစစ်အမှန်ဘဝမဟုတ်ခဲ့သောကွောငျ့အက ... more
2018-04-15 08:49:54 Block Num: 21,584,114
သူ့မိသားစုဟာသူတို့ရဲ့အီစတာတနင်္ဂနွေအစီအစဉ်များကိုဖျက်သိမ်း။ "ကျွန်မအိမ်သူအိမ်သားထဲကလက်မှတ်ယူပြီးသက်သာခံစားရဘဲ, ငါအိမျတျော၌ကထွက်ခွာသက်သာခံစားရဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။ Wahl တစ်အစားအစာန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှာထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ချီတဲ့ထီပေါက်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူကနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးကျော် $ 324,6 သန်း၏ငွေသား option ကို ယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ "ငါသည်နေ့တိုင်းလက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်မဝယ်ကြဘူး (Mega သန်းနဲ့ချီတဲ့) ထိုအတိတ်မောင်း" ဟုသူကသူအနိုင်ရသူအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်ဘယ်မှာ Trenton အတွက်နယူးဂျာစီပြည်နယ်ထီဌာနချု ... more
2018-04-15 02:04:30 Block Num: 21,576,007
Good post read 1min
အဖျော်ယမကာအခွန်အမှန်တကယ်အသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိ, မရှိတုန်းပဲအချို့သောအဘို့ကိုသိရန်စောလွန်းရဲ့ငြင်းခုန်။ Philadelphia တွင်, ထိုအခွန်အခများသည်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များ ?(; ကန်ဒန်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်ဝီလ်မင်တန်, ဝဲ Trenton, နယူးဂျာစီ) တွင်နေထိုင်နေနှင့်ပတ်သက်ပြီး 900 လူတွေကိုမေးတယ်။ Philadelphia တွင်နေထိုင်သူများအခွန်လွန်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ sugary ဆိုဒါမသောက်အစီရင်ခံရန် 40% လျော့နည်းဖွယ်ရှိ ရှိ. , စွမ်းအင်ဖြည့်အချိုရည်သောက် 64% လျော့နည်းဖွယ်ရှိ။ အဲဒီအစား, သူတို့ကပိုရေသောက်သလ ... more
2018-04-12 18:03:00 Block Num: 21,508,793